Government - Regional, Africa, Zimbabwe
Includes national and provincial government, law and military information. Politics links are in Politics.
ICL: Zimbabwe Index Information on the constitutional background provided by the International Constitutional Law Project.
IFES - Election Guide: Zimbabwe Includes government overview, elections, news and links.
Medical Research Council of Zimbabwe A national statutory body responsible for promoting, reviewing and monitoring health research in Zimbabwe, serving as the Ethics Committee for several institutions.
Prime Minister of Zimbabwe Official site provides details of the transitional cabinet, news items, photograph gallery and personal biography.
The Constitution of The Republic of Zimbabwe Full text of the draft, structured on twelve chapters, also available in MS Word and Acrobat PDF formats.
US Law Library of Congress - Zimbabwe Annotated compendium of online sources providing access to primary documents, legal commentary and general government information about specific jurisdictions and topics.
World Legal Information Institute - Zimbabwe Catalog and search facilities for over 500 databases from 55 countries including case-law, legislation, treaties, law reform reports, law journals, and other materials.
World Statesmen - Zimbabwe Review of the country's history, politics, leaders and international organizations and treaties. Includes map, constitution, national anthem and pictures of historical flags.
Zimbabwe Ministry of Foreign Affairs Provides information about government policies and foreign relations, the country and its people.
Zimbabwe Ministry of Health and Child Welfare Provides details of internal departments and agencies, services and minister profiles.
Zimbabwe Parliament Provides current Bills, order paper, Hansard transcripts of debates, Meet Your MP plus details of committees and the constitution.